Adeegga axdi qarameedka CNC - ganacsiga OUZHAN (SHANGHAI) CO., LTD
Leading qiraysa CNC Milling Service-OEM / ODM Shiinaha CNC Milling / Qaybo la shiiday
Ma u baahan tahay lagu kalsoonaan karo Milling CNClamaane aan tayo lahayn? Ouzhan Trade (Shanghai) Co., Ltd. waa shirkad khibrad iyo khibrad uleh China CNC oo bixisa saxAdeegyada axdi qarameedka CNC oo ay la socdaan mashiinno casri ah oo ay ka mid yihiin Mashiinka CNCxarumo laga soo bilaabo 3 dhidib ilaa 5 dhidib iyo injineero xirfad leh. Hawl wadeenadeenu waxay ku fiicnaadeen barnaamijyada CAD (naqshadda kombiyuutarka lagu caawiyo) iyo barnaamijyada CAM (wax soo saarka kombiyuutarka ku shaqeeya). Waxay had iyo jeer awoodaan inay helaan habka ugu wanaagsan ee ay ku soo saari karaan tayada ugu sareysaQaybo la shiiday CNC iyo qaybaha macaamiisha.
Iyada oo leh awoodo adag iyo sannado khibrado hodan ah, waxaan ku bixin karnaa darajo sare laakiin qiimo jaban Adeegyada axdi qarameedka CNC oo ay ku jiraan 3-dhidibka Mashiinka CNC xarumaha ilaa 5-dhidibka Mashiinka CNC xarumaha loogu talagalay waxsoosaarka xawaaraha sare ee CNC, noocyada degdegga ah, iyo saxsanaanta Mashiinka CNCiyo leexashada. Alaabtayada wax lagu shiido ee tayo sare leh ee CNC waxay ku lug leeyihiin berrinka warshadaha otomaatiga, aerogenerator, qalabka gawaarida gawaarida, qalabka mashiinka, qalabka caafimaadka, qalabka shaybaarka, qalabka nalalka, iwm.
Ouzhan Qiyaasta Awooda Milling CNC iyo Astaamaha:
- 15 sano oo waayo-aragnimo ah iyo aqoon-sida loogu jiro Adeegyada makiinada CNC, Ouzhan badanaa waxay bixisaa OEM / ODM Adeegga axdi qarameedka CNC iyo alaabooyinka la xiriira oo ay ka mid yihiin qashin-qashin sax ah, qodista birta, qashin-qubka caagga ah, iwm.
- Taageer wax soo saar dufcadeed oo hooseeya, dhexdhexaad ah ama heer sare ah.
- Soosaarid deg deg ah iyo soosaarid adeegsi dhamaadka ah.
- Saxsanaanta cabbirka sare, waxsoosaarka xawaaraha sare iyo isku halaynta sare.
- Baaxad ballaaran oo ah biraha ikhtiyaariga ah iyo qalabka balaastigga ah.
- Waxsoosaar xoog leh iyo waqtiga dhalmada oo degdeg ah.
- Dhammaadyo loo baahan yahay iyo dulqaadasho adag ayaa la heli karaa.
- In ka badan 20 nooc oo horumarsan Mashiinka CNC mashiinada Ouzhan.
Maxaad u Doortaa Adeegyada Milling Ouzhan CNC
Qalabkeena wax soo saar ee muhiimka ah waxaa laga keenaa Switzerland iyo Japan, taas oo macaamiisha siin karta saxnaan sare (± 0.01mm) oo raqiis ah Mashiinka CNC qiimaha.
Awoodda wax soo saar ee CNC badan
Mashiinka ka sakow, waxaan ku takhasusay leexashada, lathing, qodista, Adeegyada leexinta iyo qodista CNC, sidaa darteed waxaad ka heli kartaa xulasho ballaaran oo ah Qaybaha mashiinka CNC kooxdeena aan ku kalsoon nahay.
Waxaan haynaa shaqaale kormeer tayo leh & qalab, sida ku cad heerarka caalamiga ah ee alaabooyinkaaga si ay u tijaabiyaan, una soosaaraan warbixin tijaabo ah oo faahfaahsan macaamiisha ' Qaybaha makiinadaha CNC.
Cabirro iyo qaabab loo qaabeeyey ayaa la heli karaa. Ku soo dhawow inaad wadaagto sawirkaaga 2D ama 3D ee ah Qaybaha makiinadaha CNC nala, aan ka wada shaqeyno sidii nolosha looga dhigi lahaa mid hal abuur leh.
Waa Maxay Adeegga Milling CNC & Sidee Ayuu U Shaqeeyaa Milling CNC
Mashiinka CNC waa nidaam wax soo saar kala-goyn ah oo si dhakhso leh uga soo saara alaabta birta ama balastikada si loo soo saaro qaybo sax ah oo leh dulqaadasho adag.
Milling CNCayaa ugu habboon ugudambeyn ahaan ama geedi-socod dhammaystiran oo loogu talagalay qalab shaqeysan oo horay loo farsameeyay, oo qeexitaan ka bixinaya ama soosaaraya astaamaha qaybta, sida godadka, boosaska, iyo dunta. Si kastaba ha noqotee, geeddi-socodka ayaa sidoo kale loo isticmaalaa in lagu qaabeeyo qayb ka mid ah alaabada kaydka bilow ilaa dhammaad. Labada xaaladoodba, habka wax shiidku si tartiib tartiib ah ayuu uga soo saaraa walxaha si uu u sameeyo qaabka iyo qaabka qaybta la doonayo. Marka hore, qalabku wuxuu jarayaa qaybo yar-yar - ie, jajabyo - oo laga jaro qaybta shaqada si loo sameeyo qaabka iyo qaabka ugu dhow. Kadibna, shaqaaluhu wuxuu maraa habka wax lagu shiidayo saxsanaanta aadka u saraysa iyo saxsanaanta weyn si loogu dhammeeyo qaybta astaamaheeda saxda ah iyo qeexitaankiisa. Caadi ahaan, qayb la dhammaystiray waxay u baahan tahay dhowr marin oo makiinado ah si loo gaaro saxsanaanta iyo dulqaadka la doonayo. Qaybo badan oo joomatari ahaan kakooban, qalabayn badan oo mashiin ah ayaa laga yaabaa in loo baahdo si loo dhamaystiro habka been abuurka.
Qalabka Milling CNC - Qalabka loo adeegsado Milling CNC
Qalabka loo heli karo Milling CNC
Naxaas C360 naxaas C360
Codsiyada Adeegyada Milling CNC iyo Qaybo
Halkan waxaa ku yaal xulasho ballaaran oo ah adeegyo dhammaystiran dusha sare ee biraha ah ee aad u dooratay qaybaha mashiinnada mashiinka CNC si loo hagaajiyo muuqaalka qaybaha, dusha sare ee dusha sare, iska caabbinta daxalka, iyo astaamaha kale: